Esi see foto anyị Mac ekele Photo Booth | Esi m mac
Esi see foto anyị Mac ekele Photo Booth
Na Mac anyị enwere ọnụọgụ ọrụ nke taa anyị nwere ike ichefu, mana nke ahụ nwere ike ime ka anyị pụọ na nsogbu. Iji maa atụ, enwere ngwa etinyere n’ime Mac anyị niile, amaara dị ka Photobooth, nke ghọrọ mgbanwe mgbanwe 10 ma ọ bụ 15 afọ gara aga. Kpamkpam ọ bụ maka ịse foto na foto a na egosi na igwefoto FaceTime anyị. Ọ bụ eziokwu na ọ bụghị Macs niile nwere igwefoto ahụ. Laptọọpụ ndị kachasị ọhụrụ: MacBook, MacBook pro, MacBook Air nwere igwefoto FaceTime nke dị elu ma ọ bụ nke dị ala karịa, dabere na afọ ya. Ọ bụrụ na, n'aka nke ọzọ, ịnweghị otu n'ime ngwaọrụ ndị a, ịnwere ike iji igwefoto mpụga.Ihe mbụ anyị ga-eme bụ rụọ ọrụ Photo Booth. Nke a nwa afọ Apple ngwa pụrụ ịchọta ke ngwa nchekwa. Mana ọ bụrụ na anyị chọrọ ịchọta ya ngwa ngwa, anyị nwere ike ịnweta LaunchPad ma ọ bụ Akara, ma tinye okwu ahụ Photobooth.
Mmetụta mbụ anyị nwere bụ ịchọta onwe anyị n'ihu otu kpochapụla ụlọ ndozi, na Obere Apple ịke. Na ala nke ngwa, anyị na-ahụ a acha uhie uhie, yana akara igwefoto n'ime. Site na ịpị bọtịnụ a, a ga-arụ ọrụ nke atọ nke atọ. Mgbe oge a gasịrị, ga-agba foto ahụ. Foto ahụ ga-adị na akụkụ aka nri ala nke ngwa ahụ, dị ka a ga - asị na ọ dị maka nhọrọ. N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na foto ahụ adịghị amasị anyị ka esi ewere ya, anyị nwere ike ịmegharị usoro ahụ wee họrọ nke kachasị amasị anyị.
Ugbu a anyị nwere foto zuru oke, anyị nwere ike ịkekọrịta ya: ọzọ ala Apple ngwa: mail, ndetu, ihe ncheta, ozi. Yana netwọk mmekọrịta dị ka Facebook, Twitter ma ọ bụ Flickr na n’ikpeazụ, ndepụta nkesa kachasị eji eme ihe ma ọ bụ jiri ya dị ka profaịlụ profaịlụ na onye ọrụ Mac anyị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Esi see foto anyị Mac ekele Photo Booth
Kalinda Pop, Omume na ngwa ndị ọzọ na ere maka obere oge
Hichapụ naanị faịlụ ehichapụ site na draịva USB site na ahịhịa